कफी : स्वास्थ्यका लागि फाइदा/बेफाइदा दुवै - NepalKhoj
नेपालखोज २०७९ वैशाख २४ गते १४:५७
काठमाडौं । कफी स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक भएको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ । दिनको २ देखि ३ कप पिउनाले लामो समयसम्म बाँच्न मद्दत गर्ने केही वैज्ञानिकहरू बताउँछन् । दैनिक दुईदेखि तीन कप कफी पिउनाले मुटुसम्बन्धी समस्या र कुनै पनि कारणले मृत्यु हुने खतरा कम हुने तीनवटा नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । कफी बिन्स एन्टिअक्सिडेन्ट र फ्लेभोनोइड्सले भरिएको हुन्छ । कफीले हाम्रो कोषिकालाई क्षतिबाट जोगाउँछ । हृदय रोगको जोखिम कम गर्छ ।
केही वर्षदेखि विश्वमा विशेषज्ञ कफी पसलहरू, ठूला नामका क्याफे चेनहरू र कफी बिन रोस्टरहरूको वृद्धि भएको छ । विश्वभरि नै कफी माग उच्च छ । संसारमा कफी पिउनु रुचि तथा फेसन दुवै छ । एसियाभरि कफीको माग आगामी वर्षहरूमा अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ । हङकङको बजार रणनीति परामर्शदाता मेर्सोल एन्ड लुओको २०२१ को रिपोर्टअनुसार, २०२० मा ३४ दशमलव ४५ बिलियन अमेरिकी डलरको कफी बिक्रीको साथमा जापान अग्रस्थानमा छ । चीन एसियाको दोस्रो ठूलो कफी बजार हो । जसको बिक्री १४ दशमलव २५ बिलियन अमेरिकी डलर छ । यस्तै दक्षिण कोरिया तेस्रो ठूलो कफी बजार भएको देश हो ।
विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख भएअनुसार सिंगापुर, हङकङ र मकाउ पनि कफीका उत्कृष्ट बजारहरू हुन् । जसमा वार्षिक पाँच प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको छ ।
कफीको बढ्दो लोकप्रियतासँगै हृदयलाई सुरक्षित गर्न सक्नेमा चिकित्सकहरू पनि विश्वस्त छन् । हालैका तीनवटा अध्ययनका अनुसार दिनको दुईदेखि तीन कप पिउनाले मुटुसम्बन्धी रोग, हृदयाघात, मुटुको लयमा समस्या वा कुनै कारणले मृत्यु हुने खतरा १० देखि १५ प्रतिशत कम हुने पत्ता लगाएको छ । अध्ययन हृदय रोग भएका र नभएका मानिसहरूमा केन्द्रित गरिएको थियो ।
‘कफीले मुटुको धड्कन बढाउने हुनाले, कतिपय मानिसहरू चिन्तित हुन्छन् कि यो पिउनाले केही मुटुसम्बन्धी समस्याहरू निम्त्याउन वा बिग्रन सक्छ,’ अस्ट्रेलियाको मेलबर्नस्थित अल्फ्रेड अस्पताल र बेकर हार्ट इन्स्टिच्युटका प्राध्यापक र एरिथमिया अनुसन्धानका प्रमुख डा. पिटर किस्लरले बताए ।
डा. पिटरले भने ‘यहाँबाट कफी पिउन बन्द गर्न सामान्य चिकित्सा सल्लाह आउन सक्छ । तर हाम्रो डेटाले सुझाव दिन्छ कि दैनिक कफी सेवनलाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन, बरु हृदय रोग भएका र नभएका मानिसहरूका लागि स्वस्थ आहारको एक भागको रूपमा समावेश गर्नुहोस् । हामीले कफी पिउने या त तटस्थ प्रभाव भएको फेला पारेको छ, जसको मतलब यसले कुनै हानि गर्दैन वा हृदय स्वास्थ्यका लागि फाइदाहरूसँग सम्बन्धित छ ।’
यदि दिनमा चार कपभन्दा बढी पिउनुहुन्छ भने, तपाईं डिक्याफिनेटेड कफीमा स्विच गर्न चाहनुहुन्छ, जसमा क्याफिनयुक्त विविधताभन्दा लगभग ९७ प्रतिशत कम क्याफिन हुन्छ । संवेदनशील व्यक्तिहरूले कफी र अन्य क्याफिनयुक्त पेय पदार्थहरू पूर्णतः बेवास्ता गर्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । किनभने क्याफिनले मुटुको धड्कन निम्त्याउन सक्छ । उनीहरूलाई चकित र चिन्तित महसुस गर्न सक्ने चिकित्सकको भनाइ छ ।
हङकङको माटिल्डा इन्टरनेसनल अस्पतालका आहारविद् करेन चोङ भन्छिन्, ‘कफीप्रेमीहरूले यसलाई अतिभोग गर्ने इजाजतपत्रका रूपमा लिनु हुँदैन ।’ उनी थप्छिन्, ‘म बच्चाहरू र किशोरकिशोरीलाई यी पेयहरू सिफारिस गर्दिनँ किनभने क्याफिनले तिनीहरूको स्नायू र हृदय प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ वा स्तनपान गराउँदै हुनुहुन्छ भने, दिनमा एक वा दुई कपभन्दा बढी नपिउन सुझाव दिन्छु ।’
धेरै कफी पिएमा हड्डीलाई असर गर्न सक्छ; केही अध्ययनहरूले कफीको अत्यधिक खपत र क्याल्सियमको उच्च हानिबीचको सम्बन्ध फेला पारेको छ । कफी बिन्समा एन्टिअक्सिडेन्ट र फ्लेभोनोइडहरू उच्च हुन्छन् । प्राकृतिक रूपमा हुने यौगिकहरू जसले हाम्रा कोषिकाहरूलाई क्षतिबाट जोगाउँछ र रोगको जोखिम कम गर्छ ।
उपलब्ध कफी बिनको दुई सबैभन्दा सामान्य प्रकारहरू रोबस्टा र अरेबिका हुन् । रोबस्टा बिन्समा अरेबिका बिन्सको तुलनामा एन्टिअक्सिडेन्टको मात्रा बढी हुन्छ तर यसमा क्याफिनको दोब्बर मात्रा हुन्छ ।
कफीको आनन्द लिने सबैभन्दा स्वस्थ तरिका सादा (कालो) वा बिरुवामा आधारित दूध वा कम फ्याट गाईको दूध हो । विश्व खाद्यविद्अनुसार क्रिम र चिनी सिरप छोड्नुपर्छ । कालो कफी धेरै पिउनेहरूले थप स्वादका लागि दालचिनी वा जाइफल थप्न खाद्यविद्हरू सिफारिस गर्छन् ।